Ubuchwepheshe, VoIP uhlelo lokuxhumana
Noma yimuphi inkampani enkulu noma inhlangano kuyinto izindleko eliphezulu ekhokhela amakholi wefoni. Kodwa kuvela kulesi sihloko ukuze kakhulu ukunciphisa izindleko ukuthenga lomasango ngayinye. Kuze kube manje, ukuthuthukiswa IP-telephony kuyinto ngokushesha futhi kuyazuzisa kunalokho ngokushesha. Ukuguqulwa yanoma yimuphi exchange ekhona Kwenziwa ngokushesha, njengoba ngayinye lomasango isethwe lula. Lokhu kuthuthukisa kuzonciphisa izindleko kokubili elide futhi nezingxoxo ngamazwe.
Ngayinye Gateway kakhulu inenzuzo izinkampane ezinkulu ukuthi babe amagatsha hhayi kuphela emadolobheni ahlukene, futhi, mhlawumbe, emazweni ehlukene. Ukusetshenziswa kule divayisi ivumela ukuhunyushwa wonke amakholi wefoni ku-intanethi. Uma efakwe adaptha ngayinye, manje uzokhokha okuningi kancane, ngisho noma ngeke MBs yokukhokha traffic.
Muva nje, ukukhuluma nge-Internet engenza nje abasebenzisi yakhe. Ngayinye Gateway ikuvumela ukuxhumana nge-Internet futhi ucingo amanethiwekhi kanye nabasebenzisi. Izindleko imishini incane, futhi izinzuzo uzokubona cishe ngokushesha ngemva kokuba ixhunywe.
Ukuze ukuxhumana eshibhile usebenzisa VoIP-imishini, kunezizathu eziningana nababhalisiwe eziyinhloko:
- Uma inethiwekhi zokuxhumana amaphakheji, ezisetshenziswa wefoni bendabuko, izindleko umthengi ngempela eqolo, ke ukusebenzisa ngayinye esangweni, uthola izixazululo ngichithe, okuyinto ishibhile, njengoba amanethiwekhi amaphakethe zokuxhumana;
- ukusetshenziswa kwalesi imishini vocoders esetshenziswa noma amakhodekhi izwi. Kuyinto ukusetshenziswa yabo futhi inikeza inkulumo ekhomphyutheni, okuyinto traffic ingasaphathwa.
Ukuze siqonde umahluko phakathi ne-IP sefoni kanye wefoni digital, singasho ukuthi amandla ka ngowokuqala imayelana 6-13 kbit / s, kuyilapho yesibili kubalulekile ukuhlinzeka isiteshi 64 kbit / s (ISDN).
Ngokuvamile ukuxhumana abahlinzeki yendabuko izidingo elide futhi sefoni international, isizathu ngezindlela ezimbili:
- usebenzisa inethiwekhi ngocingo, iklayenti ngayinye yenza iqoqo iseva amakamelo ke ukugunyaza nge pin ikhodi bese ongabashayela inombolo oyifunayo. Ububi le ndlela iyona khona esiyisibopho inombolo yendawo ezivamile;
- ukusetshenziswa VoIP Gateway ivumela zonke izingcingo ngaphandle isidingo sokuba inombolo yasendlini. Ukuze umsebenzi wakhe kuphela sidinga isiteshi ewebhu ukunikeza umhlinzeki. Futhi, esikhundleni esangweni zingasebenzisa hardware noma isofthiwe IP-amafoni.
Nge ukufakwa kwalesi imishini linikeza ukuthi kungenzeka ukudala yenkampani sezingcingo. Kungenzeka ukuba aqhube yonke izincingo ngaphakathi enkampanini usebenzisa yangaphakathi inethiwekhi IP-based. Lezi amanethiwekhi afeze imisebenzi elandelayo:
- ukuhlinzekela ukuhamba eliphezulu bonke abasebenzisi, ngakho uxhumano kungaba kwenziwe nganoma yingasiphi ufinyelele amanethiwekhi IP ezisekelwe;
- ukuthola ubudlelwano phakathi amagatsha, okuyinto zitholakala emadolobheni ahlukene;
- bonke abasebenzisi zenziwe ububanzi eyodwa izinombolo;
- ivumela ukuba kabanzi usebenzisa amasevisi afana alalelwayo video umhlangano;
- kulula ukwakha izikhungo sokusingatha amakholi wefoni.
Ukusetshenziswa VoIP njengomhlatshelo kwenza kube nokwenzeka eziningi imisebenzi ukuthi angeke kwenziwe usebenzisa ezivamile ucingo amanethiwekhi:
- ithuba ukwenza amakholi ngokuqondile website enkampanini, yena lowo okuthiwa ucingo Click2Dial;
- Ukusetshenziswa okuzenzakalelayo kubo ulwazi izwi, kanye izingqungquthela, komsindo nevidiyo;
- ethwele ubone yonke izingcingo ezingabanjwanga usebenzisa imeyili yezwi ;
- ikhono ukunquma isimo inthanethi kanye okungaxhunyiwe se e inethiwekhi nabanye.
Kuyini yonke (incazelo umqondo)